FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LEAVITT BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Leavitt Bulldog
Mojo the Leavitt Bulldog amin'ny faha-4 taonany
Ny Leavitt Bulldog dia alika hozatra sy salantsalany manana tanjaka lehibe, filaminana ary atletisma. Izy dia mahay mandanjalanja sy refy, tsy misy fiasa mihoa-pampana na misongadina. Manana ny endrik'ilay alika mahavita manao ny asany tany am-boalohany izy, ny manangona omby. Misongadina sy manaitra ny loha OEB. Ny manodidina ny loha dia farafaharatsiny mitovy amin'ny haavon'ny alika amin'ny malazo. Ny takolaka dia lehibe, mandroso tsara ary mampiseho hozatry ny valanoranony matanjaka. Azo ekena ny handrina somary ketrona. Ny karandohany dia lehibe nefa mifanaraka tsara amin'ny vatana hozatry ny alika sy ny soroka malaza. Misy sisiny avy eo amin'ny fijanonana mankany amin'ny sokotra. Manana karandoha tery sy handriny izy io. Efatra sy malalaka ary lalina ny vavam-bolam-baravarankely, ary azo antoka ny fetrany. Ny halaviran'ny tendron'ny orona mankany amin'ny fijanonana dia tsy mihoatra ny ampahatelon'ny halavirana manomboka amin'ny tendron'ny orona mankany amin'ny occiput. Ny haavon'ny molotra avy eo ambanin'ny saokany ka hatrany an-tampon'ny vavony dia mitovy na lehibe kokoa noho ny halavan'ny vavony, ka mamokatra ny vavony lalina sy efamira. Misy ketrona kely na antonony eo amin'ny vongan-trondro. Ny fllew dia semi-pendulous. Ny manaikitra dia ambany sary ary mahitsy mitsivalana. Underbite dia ¾ ”na latsaka. Ny valanoranon'ny valanorano ambany kosa dia somary miondrika avy eo aloha ka hatrany aoriana. Ny maso dia boribory hatramin'ny endriny almond sy ny antonony. Misaraka malalaka izy ireo, miaraka amin'ny zoro ivelany amin'ny maso mifanalavitra amin'ny tsipika ivelany amin'ny karan-doha ary apetraka ambany, amin'ny ambaratongam-bava, izay misy ny fijanonana sy ny vavahady. Ny lokon'ny maso dia volontany, misy molotra mainty misy volo mainty. Be ny nifin'alika. Ny nify vaky, triatra na alaina no azo ekena. Misy nify zana-katsaka 6 eo anelanelan'ny canine. Ny vitrana dia malalaka miaraka amina tsipika mihodinkodina eo anelanelan'ny orona manomboka amin'ny tendron'ny orona ka hatrany amin'ny farany ambany amin'ny molotra ambony. Ny orona dia lehibe sy malalaka amin'ny fifandraisany amin'ny sakan'ny moncot. Mainty ny lokon'ny orona. Ny sofina dia raozy, bokotra na tulipa, izay tiana kokoa ny raozy. Izy ireo dia napetraka avo sy aorian'ilay karandoha. Ny sofina dia apetraka amin'ny sakany araka izay azo atao any ivelan'ny karandohany. Kely ka hatramin'ny salantsalany izy ireo. Ny vozony dia lava halavany, malalaka ary somary arched. Kely kely kokoa noho ny loha izay fihaonan'izy roa izy ireo, ary mihalalaka manomboka eo ka hatramin'ny soroka. Somary madiodio izy io manomboka amin'ny valanorano ka hatrany amin'ny tratra, mamorona dewlap roa. Izy ireo dia malalaka, be hozatra ary manana fisarahana eo an-tsoroka. Ny scapula (soroka soroka) dia tokony ho eo amin'ny zoro 35 degre eo ho eo mijoro ary mamorona zoro manodidina ny 110 degre mankany amin'ny humerus (forearm). Ny scapula sy ny humerus dia tokony hitovy ny halavany. Ny tsipika mitsangana nalaina avy teo amin'ny tendron'ny scapula (ambony) mankany amin'ny tany dia handalo mivantana amin'ny kiho. Tsy mivily na mivadika ny kiho. Misaraka mivelatra ny tongotra, midina avy eny an-tsoroka. Izy ireo dia mahitsy mitsangana ao anaty ranjo ary mihetsika tsara, manome endrika miondrika eo anoloana. Ireo foreleg dia manana taolana antonony ary mitovy amin'ny vatana. Ny pasterns dia salantsalany ny halavany. Mahitsy izy ireo, matanjaka, malefaka ary mifanakaiky amin'ny tany. Mahery sy matanjaka ny vatana. Ny halavan'ny tendron'ny tratra ka hatramin'ny feny dia somary lava kokoa noho ny hahavony hatramin'ny tany ka hatramin'ny malazo. Ny lamosina dia malalaka sy hozatra, mampiseho hery. Topline manana roach kely (na kodiarana) miverina. Misy fianjerana any aoriana, any amin'ny toerana iva ao aorinan'ny soroka. Amin'io fotoana io dia miakatra hatramin'ny valahana ny hazondamosina. Ny tendrony avo an'ny valahana dia somary avo kokoa noho ny soroka avy eo misy tsoroka malefaka, mamorona andohalambo, hatrany amin'ny rambony. Loin (aorian'ny hazondamosina mankany amin'ny valahana) dia hozatra, salantsalany halavany ary somary arched. Ny tratra dia malalaka sy lalina miaraka amin'ny brisket hozatra. Ny taolan-tehezana dia mipetaka tsara sy boribory, tanteraka indrindra eo ivohon'ny soroka. Ny soroka ho an'ny forelegs dia voaharatra tsara. Ny valahana sy ny feny dia matanjaka sy hozatra. Musotra tsara ny tongotra Hind ary somary lava kokoa noho ny forelegs. Amin'ny toerana voajanahary dia mahitsy izy ireo, mifanitsy ary atokana rehefa jerena avy any aoriana. Ny elanelana misy eo anelanelan'ny tongotra aoriana dia ambany noho ny elanelan'ny tongotra anoloana. Ny fanakorontanana dia antonony. Ny stifles dia manana curve convex malefaka rehefa jerena avy amin'ny sisiny. Ny zoro stifle dia mifanitsy amin'ny zoro amin'ny valahana. Ny hock dia mifandraika amin'ny tany raha jerena avy amin'ny lafiny sy aoriana. Izy ireo dia mifanitsy raha jerena avy any aoriana. Ny tsipika namboarina avy any amin'ny tapany farany amin'ny vodin-tsambo, mifanandrify amin'ny tany, dia tokony hianjera eo alohan'ny rantsan-tongotra. Ny tsipika nalaina avy amin'ny tendrony ambony (anoloana) amin'ny valahana, mifamadika amin'ny tany, dia tokony hamakivaky ny lohalika (ny fitsapana roa mialoha ny fikorontanana tsara dia tsy maintsy tanterahina miaraka amin'ny volon'alika alika mifototra amin'ny tany). Ny tongotra dia somary salantsalany ary arched sy boribory tsara (tongotry ny saka). Mahitsy izy ireo raha jerena avy eo aloha. Ny tongotra aoriana dia kely kokoa noho ny tongony aloha. Ny rambony dia tokony hapetraka ambany ary hikorisa hatrany amin'ny farany. Izy io dia mety ho taho paompy na mahitsy, miaraka amina paompy tiany kokoa. Ny rambony dia tokony hahatratra ny volombava na somary fohy kokoa. Entina midina, atsivalana na avo. Ny palitao dia fohy, akaiky ary matevina. Tokony ho mamirapiratra izy io, maneho fahasalamana tsara. Ny loko dia mety ho boribory mena, volondavenona, volondavenona na mainty na mafy na miloko (fotsy). Fotsy fotsy, volondavenona, loko mena na mainty na miloko mena.
Leavitt Bulldogs dia marefo, saingy mahay sy miaro, tsy matahotra ary mpanao fanatanjahan-tena, masiaka endrika, feno finiavana ary be herim-po, be herim-po ary sariaka manodidina ny fianakaviany sy ny namany, fa fahavalo tsy misy tahotra amin'izay mandrahona ny tompony na ny fananany. Tian'io karazana io ny mitsako ary tokony omena kilalao sy taolana maro. Nylabones sy ny kilalao kongotra Kong dia ampirisihina mafy. Ny rawhides, ny fingotra malefaka ary ny kilalao feno entana dia tsy azo antoka, satria mora simba na atelina tanteraka. Leavitt Bulldogs dia maniry fatratra ny hahafaly azy ireo mba hahafahan'izy ireo mizaka tena amin'ny fiezahana hanao izay angatahina aminy. Tompony mampiseho fahefana voajanahary amin'ny alika, -piaraha-monina SY fanofanana fankatoavana dia zava-dehibe. Ny tsara indrindra dia ny fantsona angovo avo olona amin'ny karazana asa sy fanatanjahan-tena. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka. Ity karazana ity dia mirona amin'ny fandevenana sy fitenenan-dratsy.
amerikana eskimo siberian husky mix
Mety ho mora tohina bloat - toe-javatra maharary sy mahafaty matetika izay mety hateran'ny sakafo be loatra amin'ny fotoana iray. Toy ny karazany lehibe rehetra, indraindray dia misy ny dysplasia. Miasa mafy ireo mpiompy mba hitazonana azy tsy ho ao amin'ny Leavitt Bulldog, noho izany, tsy misy alika manana valahany ratsy afaka.
Leavitt Bulldogs dia hifanaraka amin'ny fomba fiainana rehetra. Tokony harovana amin'ny hatsiaka sy hafanana tafahoatra izy ireo, na dia tsy mora tohina toa ny AKC Bulldog aza izy ireo.
Ity karazana ity dia mila raisina a fitsangatsanganana entana isan'andro hanomezana fahafaham-po ny fiainam-pireneny. Rehefa voafehy tsara izy ireo dia mety ho alika mavitrika, na izany aza, faly ihany koa izy ireo amin'ny fanatanjahan-tena antonony. Izy ireo dia afaka mijanona amin'ny endrika somary tsara amin'ny alàlan'ny hozatra tsara miaraka amin'ny fanatanjahan-tena maivana. Miadana voajanahary ireo alika ireo, ary noho ny firafitra tokana ananany dia tsy tokony hamporisihina izy ireo hitsambikina na hanao fanazaran-tena mafy amin'ny maha-zazakely azy.
border collie pyrenees be afangaro
Antsoina hoe the Olde English Bulldogge , ny Leavitt Bulldog dia karazana tsy fahita firy novokarin'i David Leavitt tamin'ny alàlan'ny fiampitana ny antsasaky ny Bulldog anglisy, ary ny antsasany kosa: Bullmastiff, Pit Bull ary American Bulldog. Tamin'ny 1971 dia nanjary diso fanantenana tamin'ny Bulldogs Anglisy izy noho ny olana ara-piterahana sy ny fifohana rivotra. Hitany fa tsy nitovy tamin'ny razan'izy ireo izay salama sy tsy dia matavy loatra izy ireo. Ny tanjon'i David dia ny hamokatra alika miaraka amin'ny fijerin'ny bulldog tamin'ny taonjato faha-18, miaraka amin'ny toetran'ny Bulldogs anglisy ankehitriny, nefa salama tsara, tsy misy olana amin'ny fifohana rivotra, na ireo fitadiavana hafa rehetra izay mazàna Bulldogs anglisy ankehitriny Afaka miaina izao ny karazany vaovao. Tsy ho toy ny zana-kisoa mihitsy izy ireo, afaka mihazakazaka an-kilaometatra mandritra ny toetr'andro mafana indrindra amin'ny fahavaratra, saingy avo telo heny noho ny Bulldog maoderina voafetra izy ireo. Tsy ilaina ny fahaterahan'ny faritra cesarean. Ny insemination artifisialy, noho ny tsy fahaizan'ny lehilahy sy ny tsy fisian'ny fiara, dia nosoloina fifamatorana voajanahary. Ny androm-piainana dia mihoatra ny iraika ambin'ny folo taona. Ny tahiry fiterahana rehetra dia nisy taratra hip-hip. Tsy misy alika manana valahany ratsy. Nilaza i David fa tratrany ankehitriny ny tanjony hamokatra Bulldog miaraka amin'ny fahasalamana sy ny toetra ahafahana manompo olona fa tsy manery ny olona hanompo azy. David Leavitt dia miteraka alika miasa amin'ny alàlan'ny alika miasa, fa ny OEBKC kosa dia miteraka alika ho toy ny alika mpankafy fianakaviana. Ny tsipika sasany an'ny Olde English Bulldogge (OEB) dia nanonona ny alikany tamin'ny 2005 ho an'ny Leavitt Bulldog hanasaraka ny alikan'izy ireo amin'ireo andalana OEB hafa izay tsy nahafeno ny fenitra napetrany. David Leavitt nanorina ny mpanorina 'Ny antony lehibe mahatonga ny faniriako hanova ny anarana Breed dia ny hoe misy bebe kokoa ny Bulldog OEB hafa noho ny tena izy, ary ny ankamaroan'ireo alika ireo dia tsy manana ny endrik'ilay Bulldog miasa taloha. Ekeko fa ny avonavonako no nahatonga ahy te-hanazava ireo alika mavesatra ireo fa tsy zavaboariko. Tsy afaka nanery azy ireo hiova aho ary ny valiny lojika dia ny fanovana anarana izay tena tsy marina ho an'ny vanim-potoana ezahantsika hamoronana. '
border collie boxer mifangaro alika kely
laboratoara volontany mix retriever volamena
Hooch the Leavitt Bulldog puppy amin'ny faha-13 herinandro
Hooch the Leavitt Bulldog puppy amin'ny faha-13 herinandro nilalao baolina kitra
Hooch the Leavitt Bulldog puppy amin'ny faha-13 herinandro nilalao tamin'i Mojo ilay Leavitt Bulldog 4 taona
Hijery ohatra misimisy momba ny Leavitt Bulldog
Sary Leavitt Bulldog 1
orona manga savoro sisin'ny pitbull
mifangaro volo terrier shih tzu mifangaro
Alika kely retriever volamena 3 volana